सरकारले सुनेन सुस्ताबासीको सुस्केरा ! – Samatal Online
सरकारले सुनेन सुस्ताबासीको सुस्केरा !
नवलपरासी – प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत नारायणी नदी पारीका सुस्तावासीहरुको दैनिकी जोखिममै बित्छ । लामो समयदेखि नारायणी नदीमा पुल नहुँदा उनीहरु जोखिम मोलेरै डुङ्गाको यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
‘लामो समय भयो जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’ स्थानीयवासी मुन्ना खाँनले भने,‘ समस्या समाधानका लागि हामीलाई झोलुङ्गे पुल आवश्यक छ । वारपार गर्दा धेरै पटक डुङ्गा पल्टिन्छ । ज्यान दाउमा राखेर यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’
डुंगाको जोखिमपूर्ण यात्राका कारण बजार गएका घरका सदस्यहरु साँझ फर्कदा केही हुने हो कि ? भन्ने चिन्ताले सधैँ पिरोल्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् । विकल्पको रुपमा रहेको डुङ्गामा सवार नगरे दैनिकी चलाउन निकै सकस हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
झोलङ्गे पुल नभएकाले यात्रा गर्न असहज हुने गरेको स्थानीयवासी आदम खाँनले aताए । खाँनले भने, ‘डुङ्गामा जान र आउन धेरै समय लाग्ने र रातिको समयमा डुङ्गा नचल्ले भएकाले विरामी पर्दा कतिको समयमा उपचार नपाउँदा अकालै ज्यान ज्यान गरेको छ ।’
नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल मात्रै सरकारले बनाई दिए यी सबै समस्या समाधान हुने उनीहरु बताउँछन् । उनीहरुको एउटै माग छ- सरकारले नारायणी नदीमा पुल बनाइदिए हुन्थ्यो ।